Taran Futsal ah oo lagu maamuusayay masuul Isboorti oo hore oo lagusoo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Monday January 26, 2009 - 12:02:19
Garoon ku yaala degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay gellinkii dambe lagusoo gabagabeeyay tartan Fustal ah oo muddo bil ah socday laguna maamuusayay Alle ha u naxariistee Marxuum Aba Nuur Abati Sheekh.
Maxkamadaha Islaamiga iyo madaxda xiriirka kubada cagta oo kulan xasaasi ah ku yeeshay garoonka Stadium Muqdisho
Thursday January 15, 2009 - 21:34:49
Kadib muddo 2 sanadood ah oo ay ciidamo Itoobiyaan ahi daganaayeen ayaa wafdi ka socda xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagtu waxaa uu maanta oo khamiis ah booqday garoonka ugu weyn ee kubada cagta Dalka Soomaaliya ee Stadium Muqdisho taas oo ka dambeysay kadib markii ay ciidamada Itoobiyaanku isaga…
Xulka Soomaaliya oo dhabarka dhulka u dhigay dhigooda Tanzania.
Saturday January 03, 2009 - 18:54:10
Xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa maanta ka badiyay xulka dhigooda ah ee dalka Tanznia cayaar qeyb ka ahayd tartanka qaramada dalalka bariga iyo bartamaha qaarada Afrika oo haatan ka socda dalka Uganda.
Xulka Qaranka Soomaaliya oo bari yeelanaya cayaarta ugu horeysa tartanka CECAFA senior challenge cup.
Wednesday December 31, 2008 - 10:11:32
Xulka qaranka kubada cagta ee dalka Soomaaliya ayaa ku sugan magalada Kambala ee xarunta dalka Uganda halkaas oo ay Soomaaliya kaga qeyb galeyso tartanka kubada cagta qaramada bariga iyo bartamaha Afrika, waxaana xulka Soomaaliya doraad si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Kambala.
Ganacsato Soomaaliyeed oo xalay xulka qaranka casho sharaf ugu sameeyay dalka Jabuuti.
Sunday December 28, 2008 - 21:44:38
Xalay ayaa waxaa magaalada Jabuuti ka dhacday munaasabad casho sharaf ah oo ay ganacsatada Soomaaliyeed ee halkaa ku sugan ku sagootinayeen xulka qaranka kubada cagta dalka Soomaaliya oo u diyaar garoobaya ka qeyb galka tartanka CECAFA senior challenge cup oo ee dhawaan ka furmi doona dalka Uganda.
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta oo bah-weynta Isbooriga Soomaaliyeed uga tacsiyadeedyay geeridii ku timid Macalimiintii kubada koleyga Ibraahim Buruko iyo Cumar Anyeelo.
Saturday December 27, 2008 - 21:15:27
Qoraal saxaafadeed maanta kasoo baxay xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa tacsi tiiraanyo leh loogu diray guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaana bah-weynta Isbooriga dalka oo looga tacsiyadeeyay geeridii naxdinta lahayd ee 26-kii bishan ku timid macalimiintii kubada koleyga Soomaaliyeed Cumar…
Garsoorayaasha kubada cagta Soomaaliya oo seminaar loo soo xiray maanta.
Thursday December 25, 2008 - 21:13:55
Seminaar Soconayay Muddo Sedex maalmood ah ayna ka qeyb galeen 27 ka tirsan garsoorayaasha kubada cagta Soomaaliya ee heerka koobaad ayaa maanta lagusoo gabagabeeyay Hotelka Jeddah ee magaalada Muqdisho.
Xulka Qaranka oo dhigooda Jabuuti 3-2 kaga badiyay cayaar saaxiibtinimo.
Wednesday December 24, 2008 - 09:09:11
Shalay ayaa xulalka dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti waxaa ay cayaar saaxiibtinimo ku yeesheen magaalada Jabuuti waxaana cayaartaas oo ahayd mid aad u xiisa badan ay kusoo dhamaatay daqiiqadihii loogu tala galay 3-2 oo ay guushu ku raacday xulka qqaranka Soomaaliyeed.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya oo madax ka tirsan xiriirka kubada cagta kula kulmay dalka Jabuuti.
Wednesday December 24, 2008 - 08:42:11
Ra'isul wasaaraha Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Cadde ayaa Hotelka Kempniski ee magaalada Djibouti waxaa xalay uu kulan kula qaatay guddoomie ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Axmed Nuur Xasan Cadbulle iyo xoghayaha guud ee Xiriirka Cadbi Qani Saciid Carab waxaana kulankaas looga wada…
Garsoorayaasha kubada cagta Soomaaliya oo loo qabtay Seminaar
Tuesday December 23, 2008 - 14:12:20
Manta ayaa hotelka Jeddah ee magaalada Muqdisho waxaa ka furmay seminar ay ka qeyb qaadanayaan 27 garsoore oo ah kuwa heerka koobaad ee kubada cagta Soomaaliya waxaana seminaarkaas lagu baranayaan duruus ku saabsan shuruucda cusub ee garsoorka kubada cagta aduunka.
Xulkka qaranka Soomaaliyeed oo u diyaar garoobaya ka qeybgalka tartanka Cecafa Senior Challenge Cup
Monday December 22, 2008 - 18:55:59
Xulka qaranka Soomaaliya ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay ee loogu diyaar garoobayo taranka CECAFA Senior Challenge cup oo dabayaaqada bishan ka bilaaban doona dalka Uganda.
Monday December 15, 2008 - 17:08:39
Xarunta guddiga Olomikada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay ka dhacay kulankii caadiga ahaa ee guddiga garsoorayaasha kubada cagta Soomaaliyeed waxaana kulankaa shir guddoominayay guddoomiyaha guddiga garsoore sare Aweys Axmed Jimcaale.
FIFA oo soo bandhigtay buug ka hadlaya taariikhda kubada cagta Afrika.
Monday December 08, 2008 - 22:44:19
Ururka ugu sarreeya maamulka Kubada cagta aduunka ee FIFA ayaa soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhda kubada cagta qaarada Afrika,waxaana buugaas lagusoo bandhigay shir jaraa'id oo maanta ka dhacay magaalada Paris,sida uu webka www.somsoccer.com kasoo xigtay shabakada wararka rasmiga ah ee FIFA.
Ururka saxafiyiinta Isboortiga Ciraaq oo cambaareeyay dilkii loo geystay wariye Isboorti.
Monday December 08, 2008 - 22:29:17
Rabshadaha iyo cadaawada ka dhanka ah fikirka xorta ah iyo saxaafada madaxa banaan ayaa kusii badanaya dalka Ciraaq oo todobaadkan lagu dilay saxafi si aad ah ugu caan ahaa qormooyinka isbooriga.
Madaxii Garsoorka Ciyaarihii Is-reebreebka kubada cagta Gobollada Soomaaliya ee Garowe lagu qabtay oo ka warbixiyay sidii ay cayaarahasi u qabsoomeen.
Thursday December 04, 2008 - 13:54:54
Khabiirka dhanka kubada cagta Aweys Maxamed Jimcaale oo madax ka ahaa guddiga Garsoorayaasha Ciyaarihii Is-reeb reebka Gobollada Soomaaliya wareegoodii labaad ee lagu qabtay Garowe ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada magaalada Muqdisho waxaa uu kaga war bixiyay qaabkii ay cayaarahaasi…
Kulan loogu duceynayo marxuum Faarax Sendiko oo ka dhici doona magaalada London.
Monday December 01, 2008 - 10:00:53
Magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka soconeysa qaban qaabada kulan balaaran oo loogu duceyn doono guddoomiyihii hore ee kubada cagta Soomaaliya Marxuum Faarax Wehliye cadow Sendiko oo 19-kii bishii tagtay ee November ku geeriyooday dalka Masar.
Cayaartoy lagasoo xulay tartankii gobalada ee lagusoo gabagabeeyay Garowe oo xulka qaranka kusoo biiray.
Monday December 01, 2008 - 09:38:05
Guddiga farsamada ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa shaaca ka qaaday in laba cayaaryahan oo ka mid ahaa cayaaryahanadii ka qeyb galay tartarnkii 18-aad ee gobalada wareegiisii shalay lagusoo gaba-gabeeyay magaalada Garowe si rasmi ah loogu soo biiriyay xulka qaranka Soomaaliya.
Xulka Gobalka Bari oo galabta dharbarka dhulka u dhigay dhigooda gobalka Nugaal cayaartii finalka ee wareega 2-aad cayaaraha 18-aad ee dalka.
Sunday November 30, 2008 - 21:05:41
Galabta ayaa garoonka Mire Awaare ee magaalada Garowe waxaa ka dhacday cayaar final u ahayd wareega labaad ee cayaaraha 18-aad ee kubada cagta gobalada Soomaaliya waxaana cayaartii galabta isku haleelay gobalada bari iyo Nugaal oo kaalinta koobaad u tartamayay.
Dhismaha garoonka ugu da’da weyn Soomaaliya oo lasoo gabagabeynayo horaanta sanadkan dambe.
Sunday November 30, 2008 - 16:00:02
Dib u dayactirka ku soconaya garoonka kubada cagta ee ugu da'da weyn dalka Soomaaliya ee Stadium Banaadir ayas lagu wadaa in laso gabagabeeyo horaanta sanadka inasoo aadan,sida ay injineeradu shaaca ka qaadeen maanta oo Axad ah.